Ngabe asibenzi ubulungiswa uma sidingida ezikaMaskandi singalithinti igama likaDumakahle. Phela lensizwa efike endimeni yomculo inganakekile kodwa bathe bevusa amehlo ontanga yakhe wabe esephakathi esephethe inhloko nesixhanti kulomculo. UDumakahle amagama akhe aphelele uMpilo Seluleko Nkosi. Kanti ke uzalwa intombi yakwaMasondo, ezinganeni zakwabo ungowesithathu ezinganeni ezine. Amabanga aphansi uwafunde eMadamu Primary School, ababanga aphakeme uwavunde eNgoje kanye … Read more
Uma sikhuluma ngenzinsizwa ezifike kwacaca endimeni yomculo wesintu sikhuluma ngeVulandlela lakoSibalikhulu umfana waseMabomvini eMsinga. UScebi Dlamini akafikanga ugalelekile kulendima nokuyinto engasajwayelekile manje ukuthi ethi umculi omusha efika ebe ethakaselwa kakhulu njengoba kulomculo sekwaba nabalandeli abawoqhawe lami. Oqhawe lami ilabalandeni bakaMaskandi abangawunaki umsebenzi wamanye amaciko ngoba belalela laba ababathandayo kuphela. Kumaciko amasha kuba nzima ngoba baningi … Read more
Categories Music, People Tags Inkosi yamagcokama
UMadlanduna ngenye yamaciko amadala angasekho eyibekile induku ebandla emculweni wesuntu ngoba phela umculo wakhe ubuhlabahlose kuwo wonke umuntu. Umculo kamfokaMolo ubuthandwa abancane, amabhungu nezintombi ngisho nezaguga namaxhegu imbala ngoba ubuhlukile futhi unomlayezo. UBhekumuzi Luthuli wazalwa ngomhlaka 13 Ephreli 1961, Kwa-Maphumulo budebuduze nje nedolobha Stanger, kwaZulu Natali. UBhekumuzi ungamanye amaciko abedume kakhulu. Uqale umculo wesintu ngesiginci … Read more
Categories Music, People Tags Bhekumuzi Luthuli
Kwethuse abaningi ukwedlula emhlabeni kuka Riky Rick
URikhado Muziwendlovu Makhado, obedume ngelika Riky Rick uzalwa endaweni yakwaMashu, ngomhlaka 24 Julayi 1978. Ubengumuntu obephiwe kakhulu ngoba ubengagcini ngokucula iRap kodwa ubephinde abe ngumlingisi, ngumbhali wezingoma, usomabhizinisi, abe kwingqephu, akhangise futhi ubene nkampani yakhe yomculo ebizwa ngokuthi Cotton Club Records. Ingoma yakhe ethi, “Nafukwa” ayikhipha ngonyaka ka-2014 iyona eyenza abantu banake ikhono lakhe. Ngonyaka … Read more
Categories Music, News, People Tags Riky Rick
Ukunqoba kukaBig Zulu
Akusajwayelekile ukubona iciko elicikoza ngolimu lomdabu luzidlela amahlanga kumncintiswano wohlobo lomculo olubizwa ngokuthi yiHip Hop eNingizimu Afrika njengoba sekugcwele kakhulu amaciko acula ngolimu lwesingisi. Kube ingqophamlando ukuthi uBig Zulu ocula ngesiZulu azidlele amahlanga ngokuhlabana ngezindondo eziyisikhombisi kwakade eqokwe kuzona. USiyabonga Nene ongowokuzalwa eBergville odume ngelika Big Zulu uyiciko elihluke kakhulu kwamanye acula lolu hlobo lomculo … Read more
Categories Music, People Tags Siyabonga "Big Zulu" Nene
Mtshengiseni iNdidane Gcwensa
Ngeke siphathe eyaseMngeni kwaMajozi singamphathi uMgqumeni ngoba phela uyincele kuye ingoma. Noma begcine sebeyinkukhu nempaka uGcwensa noMgqumeni kepha lamadoda akhulisene kakhulu emculweni wesintu. UMtshengiseni noMgqumeni basebenze ndawonye nomalumekaMgqumeni uMahawukela, okuthe noma esehambile uMahawukela basebenza bobabili eqenjini leBhova elibizwa ngokuthi Amagcokama. UMtshengiseni lona wazalwa ngomhlaka 06 Mashi 1972, endaweni yaseMsinga esigodini sakwaMajozi, KwaZulu Natali. Njengoba sike … Read more
Categories Music, People Tags Mtshengiseni iNdidane Gcwensa